Ukudibanisa inkampani elunxwemeni eIreland naseNetherlands ngo-2017
Ukufakwa kwenkampani elunxwemeni eIreland naseNetherlands
Indawo yokuhlala engaselunxwemeni entliziyweni yeYurophu
Irhafu ibe yinto emiselweyo kwisicwangciso-qhinga sezinto ezininzi ezinkulu, kwaye iya ixhaphaka kubo ukuba bayisebenzise ucwangciso lwerhafu kumazwe aphesheya ukwandisa izixhobo zakho okanye oko kubizwa njalo hlawula irhafu encinci.
Kutheni unokukhulisa iSwitzerland?
Kukho izizathu ezininzi zokuzibeka ezandleni zenkampani yokubonisana enembali ende kunye nesiko laseSwitzerland eliza kukunceda ukuphatha iiasethi zakho ngokufanelekileyo.
Singabacebisi bamashishini abucala bamazwe aphesheya abonelela ngokuguquguquka okuphezulu.
Sinembali ende kwaye ubuchule oochwephesha abasivumelayo njengeengcali zemali.
Senza zonke iinkqubo zethu kwiiofisi zethu eMadrid naseGeneva.
Sibonelela ngoqwalaselo lweelwimi ezimbini (iSpanish nesiNgesi) ezenzelwe wena kwaye zilungiselelwe umthengi ngamnye.
I-100% yokuqonda kunye nokugcinwa kwemfihlo kuqinisekisiwe.
Umgibe wenkampani engaselunxwemeni eIreland naseNetherlands ngokurhweba
SNangona kunjalo, zisetyenziswa kwiimeko ezininzi ziinkampani ezincinci kunye eziphakathi e-commerce babeka a Inkampani elunxwemeni eIreland o ENetherlands Ukucekeceka unciphise ityala lakho lerhafu kwi-haciendas yerhafu yamazwe asekhaya. Akukho nto iqhubekayo evela kwinyani, kuba ulawulo lwerhafu kunye nemibutho yamazwe aphesheya ilandela ezi zenzo ngezinga elincinci ngokusebenzisa amanyathelo olawulo kunye nezohlwayo ezinzima zoqoqosho kuye nakubani na othethayo ngokubaleka irhafu.
Fumana ulwazi lwasimahla
Isandwich yesiDatshi kunye neIreland kabini, imenyu yemihla ngemihla yemibutho
yena weyona nkqubo eyaziwayo neyimpikiswano yokuthintela ukuhlawula irhafu isandwich yaseDatshi kunye neIreland ephindwe kabini, esebenzisa ubuchwephesha bezobuchwephesha, ezinje ngeGoogle okanye iApple, egcina izigidi zeeuros kwiirhafu ngendlela esemthethweni ngokupheleleyo.
Yindlela esekwe ekuthumeleni iingeniso kuqala ngenkampani yaseIreland kwinkampani yamaDatshi, kwaye emva koko ithumele inkulumbuso kwinkampani yesibini yaseIreland. Isicwangciso esilula esivumele abantu abaninzi ukuba banciphise uxanduva lwabo lwerhafu kwaye yenye yezona zinto zininzi ukukhusela iimpahla zenkampani kuxinzelelo lwangaphandle kubuLawuli. Zombini zisebenza ngokudibeneyo. Kwelinye icala, iIreland iphindwe kabini ivumela ukuhanjiswa kweenzuzo zezi nkampani kwimimandla enerhafu ephantsi okanye engenanto, okanye endaweni yoko, kwiirhafu zerhafu.
Zeziphi iarhente zeenkampani ezinkulu ze-Ibex35?
Elaware, IHolland neIreland zezi iirhafu zerhafu isetyenziswa kakhulu ziinkampani kwi-Ibex yaseSpain 35 isalathiso kwi Dala iinkampani ezingaselwandle kwaye uhambise inkxaso yakhe apho. Ukusukela ngo-2009 ukuya ku-2014, inkxaso-mali yabo inyuke ngama-227%, ukusuka kuma-272 ukuya kuma-891.
Ngaba kunjalo ngomzekelo we IkeaI-Starbucks Uphando, Microsoft, iapile okanye kwi-Facebook, ethi kuthi gqi izithuba ezithile okanye ukunqunyulwa okusemthethweni kula mazwe kuxhamla kancinci kwirhafu okanye kungabikho rhafu kwezinye iimeko.
Ukwenza oku, basebenzisa amacebo athile ukucwangcisa irhafu ngenkani, ngaloo ndlela behlelwa ngamanye amaqabane e-European Union nangamanye amazwe ehlabathi, kuba bezigqala njengokhuphiswano olungalunganga.
Isandwich yesiDatshi kunye neIrish ephindwe kabini: nantsi indlela abantu behlabathi abakuphepha irhafu
Umanyano ngokudala a Inkampani engaselunxwemeni ngaphakathi Ireland kwaye enye esekwe kumhlaba werhafu ephantsi, owokugqibela ungumnini wamalungelo okuqonda. Inkampani yabazali eIreland iya kuba noxanduva lokuthengisa iimveliso zenkampani kunye nokufumana ingeniso kwihlabathi liphela. Le yokugqibela ihlawula izixa ezikhulu kwinkampani ese- kwerhafu yokusetyenziswa kwamalungelo okuqonda, okuthetha ukuba izibonelelo ezihlawuliswa irhafu eIreland zinqongophele. Idityaniswe kunyeI-sandwich ye-dutch Kuyavunyelwa ukuthintela ukuhlawulwa kwezibonelelo eIreland ngokubhatalwa "ngobukumkani" kwi Inkampani ebandakanywe eNetherlands.
Njengoko sele sibonile, elinye lamacandelo asebenzisa obu buchule buchwephesha, kuba ezi nkampani zinokudlulisela kwinxalenye enkulu yenzuzo yazo ziye kwamanye amazwe ngokufumana amalungelo obunini obunini kulo naliphi na ilizwe langaphandle elinokufumana inzuzo. . Ezinye ziqwalasele ubugcisa be ukucwangcisa irhafu ngenkaninokuba baphikiswa kakhulu yi-United States kunye ne-European Union xa bafumanisa ukuba iibhiliyoni zeeuros zisenokukhutshwa ngaphandle kwirhafu.
Ku-2015 ophelileyo, i-Ireland yatshintsha umthetho wayo ukuze isuse i I-Irish kabiniNangona kunjalo, iinkampani esele zikhe zasebenza kweli lizwe ziya kuqhubeka nokuziqhelanisa kude kube ngo-2020, zide zanele ukuba inkqubo entsha yerhafu ibekho ngexesha elithile. kwerhafu iinkampani.
Loluphi uhlobo lwebhanki yabucala e-Ireland nase-Netherlands?
Yilwa nokucwangcisa irhafu
Kwiminyaka yakutshanje, isidingo sokuthintela kunye nokulwa iinkqubo ze ukucwangcisa irhafu ngenkani Inendima ephambili kwi-ajenda yemibutho ephambili njenge-OECD okanye i-European Union, kunye nolawulo lwerhafu lwamazwe ahlukeneyo, njengeMelika, FATCA.
I-OECD ivelise imodeli yokuhambelana yerhafu yokusebenzisana iminyaka, ngenjongo yokuthintela ubuqhetseba, ukuphepha irhafu kunye nokucwangciswa kwetyala.
Amanyathelo okubamba okuchasene neenkampani ezingaselunxwemeni zaseYurophu
Ukukhukuliswa kweSiseko seRhafu kunye nokuTshintshwa kweProjekhthi (i-BEPS) liProjekthi yoTshintsho lwerhafu yamazwe aphela yokuthintela ukuphepha irhafu ngabantu abaninzi behlabathi. Inika amazwe ahlukeneyo ngezisombululo zokunciphisa "izithuba eziqhelekileyo", ezikhoyo kwinqanaba lamazwe avumela inzuzo yeenkampani ukuba inyamalale okanye idluliselwe kumthetho ngerhafu ephantsi okanye kungekho, apho umsebenzi wezoqoqosho ungenziwa.
Inqaku lomntu kunye nelimfihlo